Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives Inotungamira Inotungamira Yese-inosanganisira Resort pa2019 SATA Awards
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Awards » Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives Inotungamira Inotungamira Yese-inosanganisira Resort pa2019 SATA Awards
Awards • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Maldives Kuputsa Nhau • nhau • Sri Lanka Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Chamika De Silva, Director weSales weCentara Ceysands Resort uye Spa (3rd kubva kuruboshwe) akagamuchira mubairo uyu akamiririra Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives kumaSATA Awards 2019.
Centara's vakuru-chete-mashanu-nyeredzi Maldives nzvimbo yekutora inotora kukudzwa kwepamusoro mhiri kwenhengo nhanhatu dzeSATA
Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives akatumidzwa zita Kutungamira Yese-Inosanganisira Resort kuSouth Asia Travel Association's 4th pagore - SATA Makomborero 2019. Vanokunda vakaziviswa pamhemberero yegala manheru yakaitwa nguva pfupi yadarika kuGalle, Sri Lanka.
Iyi yegore SATA Awards yakaratidza zvinopfuura mazana manomwe emadomendi pamatanho akasiyana siyana emakambani ekugamuchira vaeni, kusanganisira emabhizimusi ekufamba indasitiri, mahotera, vashanyi vekushanya, uye vanopa masevhisi ari mumatanhatu nhengo dzeSATA, zvinoti Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal uye Shiri Ranga. SATA mubairo vanokunda vanotsanangurwa kuburikidza nemubatanidzwa weindasitiri uye vezera kutonga mapaneru, kuvhota nevamiriri veindasitiri yekufamba, uye sarudzo yepamhepo yevatengi vanofamba.
Iri ndiro gore rechipiri rakateedzana iro Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives rakakudzwa neSATA. Pa2018 SATA Awards, nzvimbo yekutandarira yakagamuchira mubairo wekuremekedza weLeading F&B Resort.
Centara Hotels & Resorts ndiyo inotungamira hotera yeThailand. Nzvimbo dzayo makumi manomwe neshanu dzakatenderera nzvimbo dzese dzakakura dzeThai pamwe neMaldives, Sri Lanka, Vietnam, Laos, Myanmar, China, Japan, Oman, Qatar, Cambodia, Turkey, Indonesia neUAE. Portara's portfolio ine zvitanhatu zvigadzirwa - Centara Grand Mahotera & Resorts, Centara Mahotera & Resorts, Centara Boutique Unganidzo, Centra neCentara, Centara Residences & Suites uye COSI Mahotera - kubvira 76-nyeredzi mahotera emahotera uye akasarudzika chitsuwa anodzokera kunzvimbo dzemhuri uye mararamiro anodhura. pfungwa dzakatsigirwa nehunyanzvi hwekuvandudza. Iyo zvakare inoshanda mamiriro-e-iyo-emusangano magungano uye ine yayo yega-yekuhwina spa brand, Cenvaree. Munguva yese yekuunganidza, Centara inonunura uye inopemberera kugamuchira vaenzi uye kukosha kweThailand inozivikanwa nekusanganisira basa renyasha, chikafu chinoshamisa, kupuruzira ma spas uye kukosha kwemhuri. Tsika yakasarudzika yeCentara uye akasiyana mafomati anotendera iyo kuti ishumire uye igutse vafambi veanenge ese mazera uye mararamiro.
Centara iri kuita zvinehunyanzvi kuwedzera kwayo portfolio ine zvimwe zvivakwa muThailand nemisika mitsva yepasirese, ichiparadzira tsoka yayo mumakondinendi matsva nemisika yemisika. Sezvo Centara iri kuramba ichikura, hwaro hunokura hwevatengi vakavimbika huchawana yakasarudzika nzira yekambani yekugamuchira vaeni munzvimbo zhinji. Chirongwa cheCentara chepasi rose chekuvimbika, Centara The1, inosimbisa kuvimbika kwavo nemubairo, ropafadzo uye mutengo wakakosha wemitezo.
Tsvaga zvimwe nezve Centara pa CentaraHotelsResorts.com.